Airbus A330neo addon Bilood 5 6 maalmood ka hor #1623
Waxaan horeyba wax badan uga soo degsaday addons gaar ahaan A330 ah. Hadda waxaan sugayaa A330neo addon waayo, FSX. Runtii waxaan rabaa inaan duulo diyaaraddaas. Runtii waxaan rabaa inaan duulo A330neo. Ma sameyn kartaa A330neo addon quruxsan fadlan? Waad ku mahadsan tahay horay. Runtii waan ku jeclahay adiga addons.